Motorola MOTOROKR S305 ဘလူးတုသ်နားကြပ် | Gadget သတင်း
Cinthia ရုသ | | ပစ္စည်းများ
Motorola က သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဂိမ်းတင်ပြခဲ့သည် စတီရီယိုကြိုးမဲ့နားကြပ် MOTOROKR S305။ အခြားသူတွေလိုပဲသူတို့ကပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုသည် စံဘလူးတုသ် လိုက်ဖက်တဲ့ devices များနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူစတီရီယို signal ကိုလက်ခံရရှိသည်။ နားကြပ်တစ်ခုစီအတွက် ၃၀ မီလီမီတာ (၁.၂ လက်မခန့်) မောင်းနှင်မှုသည်အတော်အတန်ကြီးမားပြီးကျယ်ပြန့်သောတေးဂီတကိုဖြန့်ကျက်ပေးပြီးအပြင်ဘက်အဖုံးများတွင် လမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်၊ အသံထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများ.
နားကြပ်သည်သုံးစွဲသူများအားဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်ပြုသည်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဝင်သောအခါရပ်တန့်သောဂီတသည်ခေါ်ဆိုမှုပြီးဆုံးသောအခါအလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်သည်။ Motorola မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ MOTOROKR S305 သည် 200 ကျော်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ဘလူးတုသ်ဖုန်းများ.
သူတို့ကတစ် ဦး နှင့်အတူပါလာ built-in lithium ion ဘက်ထရီ ၎င်းသည်စကားပြောချိန် ၆.၅ နာရီ၊ ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်း ၆ နာရီနှင့်အဆင်သင့်အချိန်နာရီ ၁၀၀ ပေးထားသည်။
စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်မရှိသေးသော်လည်း MOTOROKR S305 နားကြပ်များကိုAprilပြီလအစောပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Motorola MOTOROKR S305 Bluetooth နားကြပ်
မာရီယာ ဗီလာမီဇာ ဗီလာမီဇာ ဟုသူကပြောသည်
zte s305 ဆဲလ်ဖုန်း၏ဖုန်းမြည်သံအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ပါသလဲ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါ
maria villamizar villamizar အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Motorola s305 နားကြပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ မှတ်ချက်ပေးလိုပါသည်။ စျေးကွက်ထဲမှအနည်းငယ်သောအရည်အသွေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဒီဇိုင်း၊ အသံအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းများသည်စျေးကွက်တွင်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
David S ဟုသူကပြောသည်
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်၊ သို့သော်နာရီပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာဖြင့်သူတို့ကိုမသုံးနိုင်ပါ။ Motorola ဖိုရမ်များတွင်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ၊ ယာဉ်မောင်းလည်းမရှိပါ။ သူတို့၏ hotlines တွင်မဖြေပါ။
David S ကိုပြန်ပြောပါ
သူတို့ကိုငါအကြံပြုတယ်၊ သူတို့ကငါ့ကိုပီရူးနိုင်ငံမှာဒီလောက်ဈေးကြီးပေမယ့်နားကြပ်အတွက်ပေးရတဲ့နေတစ်ခုစီကကျိုးနပ်တယ်၊ အသံအရည်အသွေးအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘလူးတုစ်ခ်ျရွေးတာကကောင်းတယ်၊ အဆင်ပြေတယ်။ သူတို့မှာရှိသည်မှာခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင်သူတို့အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသံသယမရှိဘဲရှိသောစတူဒီယိုနှစ်ခုကိုနားထောင်ပါ။
အကယ်၍ သူတို့ကအရမ်းကောင်းရင်တခြားသူတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ငါဖိတ်လိုက်တိုင်းသူမြင်သမျှကိုမြင်သူတိုင်းကိုစားတယ်။ ငါသာအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ငါ pc ပေါ်မှာတောင်သုံးနိုင်လိမ့်မယ်။ ငါအောင်မြင်ခဲ့ရင်ငါဒီမှာငါပြောခဲ့တာကိုပြောပြမယ်။
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကသူတို့ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ သူတို့အရမ်းကောင်းတယ်။ LG l-c-305 ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့သုံးတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။
PC နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သင် bluesoleil ပရိုဂရမ်ကိုတပ်ဆင်ပြီး Bluetooth adapter ကို usb port နှင့် voila တွင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဘက်ထရီသည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိသည်။
နားကြပ်ကေဘယ်ကြိုးသည်အင်တင်နာအဖြစ်လုပ်ဆောင်သောကြောင့်ဤကိရိယာသည်ဆဲလ်ဖုန်းများဖြင့်ရေဒီယို mode တွင်နားထောင်ရန်အလုပ်မလုပ်ပါ။
PC နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက် info အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ သူတို့ Nokia N80 နဲ့အလုပ်လုပ်ရင်တစ်ယောက်ယောက်ပြောပြနိုင်မလား
ဟယ်လို။ အားသွင်းချိန်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ ၂၁ ကနေ ၆ ရက်အထိတစ်ညလုံးအားသွင်းနေပါတယ်။ ဘက်ထရီကိုမပျက်စီးစေချင်ဘူး၊ ပြောပြလို့ရမလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!
၎င်းကို max2charging၊ အနိမ့်ဆုံးအချိန်တွင်အနီရောင်မီးထွက်လာပြီး maxx တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်အစိမ်းရောင်အလင်းရှိလျှင်၊ ကျန်သေးသည်။
ငါလုပ်တယ် ငါ ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကစံနမူနာပြစရာပဲ။ ဒါပေမယ့်နောက် ၂ လမပြည့်ခင်မှာတော့သူကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကြားရတယ်။ ဒါပေမယ့်အတိတ်ကိုသူတို့ဖွင့်လိုက်တာကမပြည့်စုံဘူး
ဗစ်တာ -၁၀ နဲ့ဆင်တူတဲ့အရာကကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ တစ် ဦး ကကြားနာကိရိယာအလွန်နိမ့်သည်, နီးပါးဘာမျှမ။ ငါသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထပ်မံမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ဘဲပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိသူတို့ကိုငါလွှင့်ထုတ်သင့်သလားကိုမသိပါ။ အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။
နားကြပ်၏အသုံးဝင်သောဘဝ? ဤအသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းကုန်ပြီးနောက် lithium ion ဘက်ထရီကုန်သွားပြီး၎င်းကိုအသစ်တစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။